CanaPerson be Dragooned into Homosexuality? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on6September 2010 18 October 2010 Categories Discussion, FM Broadcasts, Homosexuality
5 thoughts on “CanaPerson be Dragooned into Homosexuality?”
I would like to ask you one thing. Do you take blood test examination recently? I’m so curious. You’ve many many sex partners. you didn’t avoid even same sex. Please don’t mention proudly yours this character. I depress gradually on you for this character.
10 September 2010 at 8:44 am
Did you read ATK’s article’s carefully? Did you really read between the lines and understand his intention? And have you read all of his other books? I bet you are only reading those lines that contain the word “sex” and not reading the whole thing… that’s why you don’t understand anything!!!
Please be open-minded. In these days, many young and old people need to be aware of sexually transmitted diseases and sexual harassment that may come in any form. Diseases and harassment happened because people are too shy or too afraid to discuss this matter. Aren’t you not happy that ATK is helping us by sharing his life lessons, experiences and his knowledge so that people would not make mistakes and have wrong beliefs?
I can’t believe you are living in 21st century and not understanding any of those things.
And please don’t judgeaperson before you know everything about him.
7 September 2010 at 6:45 pm
အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာပေမယ့် မြန်မာစာကို အင်္ဂလိပ်လို ဇွတ်ညှစ်ရေးထားတဲ့ “ရေချမ်းချမ်း တစ်ခွက်” အရေးအသားမျိုးနဲ့မို့ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်မရေးတော့ဘဲ မြန်မာလိုပဲ ပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကျွန်တော် သွေးစစ်ထားလား မထားလား ကျွန်တော့်စာတွေ မှန်မှန် ဖတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ သိပါတယ်။ ဆရာ“မိုး”ဆိုသူ မသိတာတော့ မတတ်နိုင်ပါ။ သိချင်ရင် ကျွန်တော့်စာတွေ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၂) ကျွန်တော် စာရေးနေတာ သည်တစ်ပုဒ်ထဲ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ စာပေါင်း များစွာ ရေးနေတာပါ။ သည်အတွက် သည်စာတွေလောက်နဲ့ ဆရာမိုး ကျွန်တော့်ကို တဖြည်းဖြည်း စိတ်ပျက်လာပြီဆိုရင်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းပါတယ်လို့ပဲ ဖြေကြားရမှာပါ။
(၃) ကျွန်တော် ကြောင်သူတော် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်ဝန်ခံတဲ့သူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမိုး ပြောသလို ကြွားဝါနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကြွားဝါသင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ တတ်နိုင်သမျှ လူမသိအောင် ဖုံးဖိထားရမယ့် ကိစ္စမှန်း ၅၃ နှစ်အရွယ် ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော် မသိဘဲ ရှိပါ့မလားခင်ဗျာ။ သိလျက်နဲ့ ဒါကို ဘာ့ကြောင့် ဖွင့်ချ ရေးထုတ်ရတာလဲ။ ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲလေးလောက် စဉ်းစားဖို့က ဆရာမိုးဆိုသူရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် လမင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြတာပါခင်ဗျာ။ ဆရာမိုးက ကျွန်တော့်လက်ညှိုးကိုပဲ မဲပြီး ကြည့်တဲ့အတွက်တော့ ကျွန်တော် ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ထိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်ကံလို့သာ အောက်မေ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမိုး(ဆိုသူ)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားကြောင့် ပြောင်းလဲရတယ်။ အပေါင်းအသင်းမကောင်းလို့ ဆိုးတယ်ဆိုတာ နေ့အိပ်မက်လည်း လက်မခံပါဘူး။ အဲ.. အကြိုက်ချင်းတူတဲ့သူတွေ စုမိတတ်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဲလို စုမိတာကလည်း ကိုယ်က ကြိုက်လို့ သွားပေါင်းတာပါ။ အလှ တကယ် မကြိုက်တဲ့သူက ပဲများတဲ့ အုပ်စုထဲမှာ နေရင်တောင် ပဲများတဲ့ အလန်း ဖြစ်မလာနိုင်သလို စာတွေ ကဗျာတွေ ကြိုက်တဲ့သူကလည်း စာရေးဆရာဆိုတာ ချိုနဲ့လားလို့ မေးတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းနေရင်တောင် စာပေကို ခုံမင်နေဦးမှာပဲ မဟုတ်လားဆရာ။ လူကြီးတွေက အပေါင်းအသင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရင် နေ့အိပ်မက် မကြိုက်ပါဘူး။
မိန်းမလျာကိစ္စကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော် ရွံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလေး အသက်ကြီးလာတော့ စာတွေ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒါလည်း သဘာဝပါလို့ လက်ခံတတ်သွားပါပြီ။ အခြောက်ဆိုပြီး နှိမ့်ချဆက်ဆံရင်တောင် မကြိုက်ချင်တော့ဘူး။
san zaw myo says:
ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ စာတွေက တကယ့်အမှန်တရားတွေပါ၊ ကျနော်ငယ်ဘ၀တုန်းက ၁၀တန်းအောင်ပြီးစ ၁၉၈၇က ဘေးနားမှာ ဆေးသမားတွေ အခြောက်တွေ ပေါတဲ့အချိန်မှာ၊ကျနော် စိတ်ဝင်စားတာက အရက်၊ ထန်းရည်နဲ့ ချောချောလှလှ မိန်းကလေးတွေပါ၊ ယခု အသက် ၄၃ မှာ အရက် ထန်းရည် ပြတ်သွားပေမဲ့၊ စိတ်ဝင်စားတာက ချောလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေပါ၊ ဘယ်သူ ဘယ်လို ဇတ်သွင်းသွင်း ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်က အဓိကပါ
Previous Previous post: Parkway Eye Centre
Next Next post: Success and Value